Usungulelwe isikhwama sokwakhelwa umuzi umfundi - Ilanga News
Home Izindaba Usungulelwe isikhwama sokwakhelwa umuzi umfundi
Usungulelwe isikhwama sokwakhelwa umuzi umfundi
Umuzi abahlala kuwo useduze kwexhaphozi
UBUNGAFUNGA ukuthi yiqhawe likamaskandi liphelezelwa ngabalandeli balo, lisuka eWorkshop, eThekwini, libheke kwiMpucuzeko kaMaskandi Festival eMoses Mabhida Stadium, uBhekamandaba Makhonza obehalaliselwa wumphakathi
wangakubo ngokugila izimanga kumatikuletsheni. Kwesishuthekiwe wumuzi wakubo ozokwakhiwa ngesikhwama abamsungulele sona
WENZE okungajwayelekile umphakathi wasemakhaya eSigodini, eMgungundlovu uhlonipha umfundi wakule ndawo ophase umatikuletsheni ngamalengiso, usungula isikhwama egameni lakhe, esizosiza ukulu-ngisa umuzi wakubo ongekho esimeni esihle.
UBhekamandaba Makhonza (17) owayefunda umatikuletsheni e-Edendale Technical High School, eMgungundlovu, ubalwa nezingqungqulu zaKwaZulu-Natal ezibeke lesi sifundazwe ebalazweni ngokuthola imiphumela emihle kumatikuletsheni.
Lo mfundi omele uMgungundlovu wonke ngokuphasa kahle, uthole o-A kuzona zowu-8 izifundo abezenza. Kulezi zifundo kubalwa iMaths nePhysical Science.
Isicelo sakhe sokuyokwenza i-Actuarial Sciences, samukelwe e-University of Cape Town naseWits, kodwa ubengakanqumi ukuthi uzoyaphi. Umphakathi waseSigodini wehlulekile wukuzibamba yinjabulo ngesenzo sikaBhekamandaba sokukhuphula igama lawo, wanikela kubo uyomhalalisela.
UNangu ‘Golide igama’ Makha wase-Edendale, oyimbongi yaseMgungundlovu, obehola umphakathi, uthi bafice isimo esingesihle kwaMakhonza base behlela ukusungula
isikhwama ukuze lo mndeni uzosizakala ngendlu enesithunzi.
“Siyijabulele impumelelo yomfana siwumphakathi wase-Edendale, sabe sesihlanganyela nomndeni ukumbonga. Okusethusile yisimo somuzi abahlala kuwona, wakhiwe exhaphozini elingabeka impilo yomndeni engozini yokuhlaselwa yizifo njengesofuba. Sesikhona
isikhwama esisunguliwe egameni lakhe umfana esihlose ngaso ukwakha umuzi wakubo.
“Siyabonga ukuthi sebekhona nabanye osomabhizinisi asebezibophezele ukusilekelela njengoba sisazama nokuthola isiza okuzokwakhiwa kusona umuzi wakwaMakhonza,” kusho uNangu.
Uthi lesi sikhwama sibhekene nokwakhiwa komuzi kuphela ukuze umfana angathi esesikhungweni semfundo ephakeme abe enengcindezi yokuthi umndeni wakubo uhleli kanjani kulo muzi awushiye kuwona.
Ekhuluma neLANGA uBhekamandaba, uthe okwenzeka kuyena kulezi zinsuku kuyamethusa ngoba yena ubengumfundi ofana nabo bonke abafundi esikoleni.
“Senginamahloni nokuhamba emphakathini ngenxa yokuhlonipheka engikutholayo. Ngibonga bonke abantu abangisekayo nabangigqugquzelayo empilweni,” kusho yena.
Unina walo mfundi, uNkz Kholekile Shange (40), uthi lokhu okwenziwe yindodana yakhe, kuyimpendulo yomkhuleko wakhe kuNkulunkulu. “Bengingalindele ukuthi ngingaphenduleka ngale ndlela, ngibonga ukuthi sengizophuma kulo mhosha esifihle kuwona amakhanda.
“Isimo salayikhaya kasisihle ngoba siphila ngemali yesibonelelo sakhe uBhekamandaba nomunye ongemuva kwakhe. Ngibonga iNingizimu Afrika ngokweseka indodana yami ngempumelelo yayo,” kusho uNkz Shange.
Previous articleKunconywa uCredo Mutwa ngomhlahlo ‘oshaye emhloleni’
Next article‘Belidle amankwebevu’ iphoyisa likhipha isidumbu